सर्वदलीय बैठक सम्पन्न, के भने प्रचण्डले ? « रिपोर्टर्स नेपाल
सर्वदलीय बैठक सम्पन्न, के भने प्रचण्डले ?
प्रकाशित मिति : 2017 April 28, 7:17 pm
काठमाडौं, १५ बैशाख । व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आब्हान गरेकोे बैठकमा संविधान संशोधन विद्येयक, स्थानीय तहको निर्वाचन, बजेट र स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको एजेण्डामाथि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।